कोरोना संक्रमितलाई आयुर्वेद औषधी : त्रिकुट र जेठीमधु
अनिता श्रेष्ठ काठमाडौं - सोमबार, भदौ २९, २०७७
विश्वभर कोरोनाविरुद्धका खोपहरू परीक्षण भइरहेका छन्।
तर, नेपालमा भने अबमात्रै ‘आयुर्वेद’ औषधीहरूको प्रभावमा अनुसन्धान सुरु हुने भएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले आयुर्वेदिक औषधीले बिरामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? भनेर अनुसन्धान गर्न लागेको हो।
परिषदका अनुसार आगामी सातादेखि यो अनुसन्धान सुरु हुनेछ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ।
परिषदका अनुसन्धानविज्ञ डा. बिसुनदयाल पटेलका अनुसार आयुर्वेदमा पहिलेदेखि नै औषधीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ‘एसटी मधु’ (जसलाई नेपालीमा जेठीमधु भन्ने गरिन्छ) र ‘त्रिकुट’ को प्रभावलाई लिएर अनुसन्धान गर्न लागिएको हो।
‘कोरोनाले थलिएका बिरामीहरूमा यो औषधीले कत्तिको प्रभाव पार्छ भनेर हेर्न जेठीमधु र त्रिकुटलाई मिसाइ खुवाएर हेर्न खोजिएको हो,’ पटेलले आयोमेलसँग भने।
अनुसन्धानका लागि विभिन्न कोरोना अस्पतालबाट १ सयजना कोरोना संक्रमित बिरामी छनोट गरिएका छन्।
‘परिषदबाट अस्पतालहरूमा पत्र पठाएर स्वीकृति लिइसकेका छौं भने बिरामीहरू पनि छनोट भइरहेका छन्,’ उनले भने।
‘¥यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायल’ विधि अपनाएर ५० जना बिरामीलाई आयुर्वेद औषधी खुवाइन्छ भने ५० जनालाई खुवाइँदैन।
यसबाट औषधी खानेलाई कस्तो प्रभाव परेको र को छिटो अस्पतालबाट छुट्छन् भनेर हेरिन्छ।
पटेलले प्रदेश ५ का अधिकांश अस्पताल र काठमाडौंका केही कोरोना अस्पताल छनोट गरेको बताए।
अनुसन्धानको समयावधि एक महिनासम्म रहेको उनले जानकारी दिए।
जेठी मधु, नेपालको चुरे क्षेत्रमा पाइने एकखाले वनस्पति हो। यो तराईको बुटवलतिर र भारतमा पनि प्रशस्त खेती गरिएको पाइन्छ।
यसले रुघा, खोकी, घाँटी खसखसाएको निको पार्न मद्दत गर्दछ। ‘सार्स कोभिड’ भएका बेला चीनले यही आयुर्वेदलाई प्रयोग गरेको थियो।
हाल नेपालमा पनि कोभिड–१९ का बिरामीलाई खुवाउन थालेको उनले बताए।
त्यस्तै, त्रिकुट तीनवटा औषधी पिपलको पात, मरिच र अदुवाको धुलो मिसाएर बनाइएको हुन्छ।
शरीरमा सुन्निएको भाग पनि बसाउन मद्दत गर्छ।
जेठी मधुसँग मिसाएर खाँदा यसले झन् बढी काम गर्नसक्छ।
यसलाई थकाइ लाग्ने, खाना नरुच्ने भएमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्रिकुट र जेठीमधु बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ।
अनुसन्धानका क्रममा बिरामीहरूलाई ५० ग्राम मधुको धुलो उमालेर छानी सकेपछि त्रिकुट मिसाउने र पाँच मिनेट राखेर खुवाइन्छ।
अनुसन्धानको नाम ‘क्लिनिकल इभ्यालुएसन अफ एसटी डिकोक्सन इन माइल्ड टु मोडरेट कोभिड–१९ केसेस’ राखिएको छ।
आयुर्वेद औषधीले संक्रमित चाँडै निको
काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा अहिले कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
यहाँ २ सयभन्दा धेरै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। केन्द्रमा उपचार भइरहेका संक्रमितहरुलाई आयुर्वेद पद्धतिबाट उपचार हुन्छ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामआधार यादवका अनुसार यहाँ उपचार भइरहेका संक्रमित ७ देखि १० दिनमा निको भइरहेका छन्।
‘गुर्जो, जेठीमधु, त्रिकुट आदि दैनिक ३ पटक सबैलाई दिने गरेका छौं। बिरामीले पनि आयुर्वेद औषधीलाई मन पराईरहेका छन्। आयुर्वेदमा पहिलादेखि प्रयोग गरेको औषधीलाई छलफल गरेर ट्याबलेट फर्ममा बनाएर दिने गरेका हौँ’ उनले भने ‘८५ प्रतिशत माइल्ड केसलाई हेर्ने हो भने, आयुर्वेद पद्धतीबाट उपचार गर्दा ७ देखि १० दिनभित्रमा निको भएको पाएका छौँ।’
उनका अनुसार अहिले यसरी बिरामीमा आयुर्वेद औषधी चलाएरै त्यसको प्रभावको अनुसन्धान भइरहेको छ।
‘अहिले नै ठ्याक्कै बिरामीहरु सतप्रतिशत निको भएको त भन्न सकिँदैन। अझै अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेको छ। तर, हामीकहाँ अहिले सम्म हेर्दा बिरामी चाँडै रिकभर भइरहेका छन्’ उनले भनेका छन्।
उनका अनुसार अहिलेसम्म यहाँबाट करिब ५ सयभन्दा बढी संक्रमित निको भएर फर्किसकेका छन्।
‘त्यसकारण केही न केही आयुर्वेद औषधीमा कोरोना विरुद्ध लड्ने क्षमता रहेको हामीलाई विश्वास भएको छ’ उनी भन्छन् ‘धेरै संक्रमितलाई निको पारेर पारेका छौ। हामीलाई त्यसले पनि उत्साह थपिएको छ। हामीले संक्रमितको निको भएको हेर्दा पनि आयुर्वेदले ठूलो भुमिका खेलेको छ भनेर, दाबीका साथ भन्नसक्छु। हाम्रै घर, आँगनमा पाउने जडिबुटी सेवन गर्नाले शरीरमा रोगप्रतिरोधक क्षमता वृद्धि हुन्छ।’